Boqortooyada Sucuudiga oo dad Soomaaliyeed masaafurisay
Buluugleey, Juun 7, 2005
Boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa labadii todobaad ee inaga tegay soo masaafurisay dad Soomaaaliyeed oo ay tiradoodu kor u dhaafeyso 1500 oo qofood, Waxaana la sheegayaa in tarxiilku uu itaasi ku ekeen oo wili qaqabashadu socoto.
Ku xigeenka Wasiir Warfaafinta dowlada KMG Mudane Salaad Cali Jeele ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Nairobi ugu baaaqay boqortooyada Sacuudiga in ay arintaasi ahayn mid ay masuuliyiinta Soomaaliyeed farxad gelineyso waana wax laga xumaado. Wasiirka wuxuu shir jaraaidkaasi si cad ugu baaqay in boqortooyda Sacuudiga ogaadaan in Soomaalida dhibaato badan ka haysato dhinaca amaanka oo welina dalka ka jirto amaan darro. Sidaas darted aynan waqtigaan xaadirka ah ku habooneyn in Soomaalida la raafo. Waa markii ugu horeysay ee masuul sare oo dowladda FKM ka hadlo dhibaatada haysato dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka dibaddisa.
Arrinta masaafurika ayaa ka danbeysay kadib markii ururka Caalamiga ah ee u dodo Xuquuqul Insaanka (Amnesty International) uu qoray warqad cabasho ah ee lagu diidan yahay sida ay Boqortooyada Sacuudiga xuquuqal aadanaha ugu takrifasho, arintaas oo la xiriirtay markii ay 6 dhallinyaro Soomaaliyeed qudha Sacuudigu ka goyay iyadoo aan lahayn qareen u doodo. Arritaas oo meel Soomalida ay dunida ka joogaanba ku cambaareeyeen boqortooyada Saciidiga falkaasi foosha xun .